Rindrambaiko 5 ho scam amin'ny fifanarahana serivisy tokony hialana | Martech Zone
Rindrambaiko 5 ho toy ny scam amin'ny fifanarahana serivisy tokony hialana
Sabotsy 9 Novambra 2013 Zoma, Jona 19, 2015 Douglas Karr
Amin'ny maha masoivohona manohana tanteraka ny mpanjifanay dia mividy fifanarahana ho an'ny rindranasa sy sehatra izahay ho fanohanana tanteraka ny ezaky ny mpanjifanay. Ny ankamaroan'ireo fifandraisana ireo Software toy ny Service Mahafinaritra ireo mpivarotra (SaaS) - afaka misoratra anarana amin'ny Internet isika ary afaka manafoana rehefa vita. Tamin'ny taona lasa, na izany aza, nifanarahana tamina fifanarahana vitsivitsy isika. Tamin'ny farany, dia ny fanontana an-tsoratra na fanodikodinam-bola izay nahatonga anay ho very vola kely. Tsy hanome anarana anarana eto aho, fa ny sasany amin'ireo orinasa dia malaza - koa mitandrema. Ireo orinasa manararaotra ireo fisolokiana ireo dia tsy hahazo ny orinasako na ny tolo-kevitro velively.
Halavany fifanarahana farafahakeliny - Ny lozisialy ho toy ny orinasa Serivisy miaraka amin'ny fitantanana kaonty sy ny fizotran'ny onboarding dia mandany vola be amin'ny fahazoana sy fahazoana mpanjifa vaovao. VOLA BE io - matokia ahy. Miasa amin'ny orinasa ESP taloha, dia mety handany vola an'arivony dolara amin'ny fandefasana mpanjifa mandefa ny mailaka voalohany. Vokatr'izany, ny fitakiana ny halavan'ny fifanarahana farafahakeliny dia tena ilaina amin'ny fahasalaman'ny orinasa. Ny olana dia maro ny SaaS manompo tena nanapa-kevitra fa hanafina ny halavan'ny fifanarahana farafahakeliny amin'ny fe-potoan'izy ireo. Raha afaka misoratra anarana amin'ny carte de crédit ary manomboka mampiasa ny kaontinao anio, tokony ho azonao atao ny manafoana ny kaontinao anio. Jereo ny pirinty tsara. Nahita motera SEO nosoniavinay izahay ary tsy nahatanteraka ny nantenainay nanana fifanarahana farafahakeliny 6 volana. Matoky tena aho fa ny fepetra farafahakeliny dia noho ny antony nampanantenain'izy ireo ny tolotra, tsy voaterin'izy ireo ary namitaka mpanjifa fotsiny izy ireo hahazoana vola be
Manasonia anio, Bill rahampitso - Ny solontenan'ny mpivarotra SaaS anao no namanao akaiky indrindra mandra-pikatonao. Misy teny hafa ilazana ny a fampanantenan'ny varotra tsy voasoratra anaty fifanarahana izany. Antsoina hoe a lainga. Nanao sonia fifanarahana isan-taona tamin'ny mpivarotra sehatra lehibe izahay tamin'ny faran'ny taona lasa. Noterena mafy ilay mpivarotra ary te hiditra ao ambanin'ny tariby mandritra ny taona ka nampanantena anay izy ireo fa tsy handoa vola raha tsy manomboka mampiasa ilay lampihazo izahay. Nanao sonia izahay ary avy hatrany dia voadidy ho an'ny sehatra. Rehefa tsy nandoa ny volako avy hatrany aho dia nalefa tany amin'ny famoriam-bola. Ankehitriny dia manenjika anay ny orinasa mpanangom-bokatra. Hatramin'izao, mbola tsy nampiasa ny lampihazo mihitsy aho ary tsy mandoa ny faktiora. Afaka mitory izy ireo raha te hanao izany. Azoko antoka fa mandany vola bebe kokoa amin'ny faktiora ara-dalàna izy ireo noho ny mahazo dolara amiko.
Fonosan'ny masoivoho - Ny orinasa iray izay nifandraisako manokana dia nampahery ahy roa taona lasa izay hanao sonia fifanarahana maso ivoho miaraka amin'izy ireo. Eo ambanin'ny fifanarahana maso ivoho dia handoa vola kely isam-bolana izahay avy eo a isaky ny mpanjifa Ny saram-pandraharahana mihena isam-bolana eo ho eo ~ 75% amin'ny vidin'ny antsinjarany. Ny fonosan'ny masoivoho dia nahafahanay nahazo fanohanana premium, fidirana tanteraka amin'ireo fiasa rehetra, seza ao amin'ny komitin'ny mpanolotsaina momba ny vokatra ary voatanisa ho maso ivoho manana alàlana amin'ny tranokalan'izy ireo. Toa fifanarahana tonga lafatra izany - mandra-pahatongatray fa tsy maintsy nanome 100% ny fanohanana ho an'ny mpanjifanay izahay. Folks - eo no misy ny fandaniana rehetra ireo! Tsy maintsy nanao sonia mpanjifa am-polony aho mba hahafahany manome mpiasa mpanohana manokana ary mbola mahazo tombony amin'ny fifandraisana. Hanohy hanondro ny mpanjifa amin'ity mpamatsy ity izahay, saingy tsy hanao sonia ny taratasin'ny maso ivoho mihitsy izahay.
Fampiasana sy sarany mihoa-pampana - Orinasa lozisialy lehibe dia mangarahara momba ny saram-pampiasan'izy ireo - indrindra rehefa miresaka be loatra saram. Tianay ireo maodely toa an'i Amazon izay miantoka ny fampiasana azy ary manaparitaka ny lehibe kokoa hampiasanao ireo sehatra misy azy ireo. Tian'ireo orinasa Circupress hampihetsika anao tsara na hampiakatra ny fifanarahanao arakaraka ny isan'ny firaketana sy ny mailaka andefasanao. Arakaraka ny andefasanao azy no mampihena ny vidiny isaky ny mandefa ianao. Ny orinasa hafa kosa dia manasazy anao amin'ny fampiasana azy. Gaga izahay rehefa nampandre anay ny sehatra marketing lehibe HUGE fa nampitombo ny vidiny izahay rehefa nanafatra ny fifandraisana rehetra izahay tao amin'ny rafitr'izy ireo - zavatra tsy noresahina tamin'ny fizotry ny varotra (nambara tamin'ny tranokalan'izy ireo fa tsy azonay). Ny orinasa hafa dia mitaky fihenam-bidy rehefa mihoatra ny fampiasanao ny rafitr'izy ireo (fantsom-pifandraisana, kaonty, mailaka, fanentanana sns.). Hamarino tsara fa ny fampiasana sy ny sarany be loatra dia mifandraika amin'ny fiverenanao amin'ny fampiasam-bola ary mamporisika ny fampiasana ny rafitra fa tsy manakivy ny fampiasana.
Auto-manavao - Tsy afaka milaza aminao aho hoe impiry aho no norotehan'ny orinasa niara-nisoratra anarana mba hizaha toetra ny rindrambaiko, nofoanako izany, ary avy eo dia voasazy indray aho. Tsy maninona izay haben'ny orinasa, fa nitranga tamiko izany tamin'ny alàlan'ny fifampiraharahana kely sy goavana. Jereo mialoha ny fotoana raha havaozina ho azy ny fifanarahana ary alao antoka fa mitaky alalana aminao ny orinasa alohan'ny hanavaozana na handroso raha tsy manana drafitra fanavaozana eo noho eo ianao.
Ny fifanarahana, ny fehezan-dalàna momba ny serivisy ary ny faktiora dia manan-danja amin'ny fahatakarana ny fifandraisanao amin'ny mpivarotra. Jereo hoe inona no mitranga amin'ny fifanarahana ataonao sy ny fifandraisanao amin'ny mpivarotra raha sendra mahita ireo olana ireo ny orinasanao:
fanafoanana - tsy mila na tsy mahazaka ny sehatra Saas intsony ianao. Orinasa mikarakara tena dia mazàna manolotra fampandrenesana 30 andro na fanafoanana eo noho eo aza amin'ny alàlan'ny sehatra misy azy ireo. Tandremo ny orinasa nosoratanao anarana amin'ny Internet miaraka amin'ny carte de crédit fa mila miantso telefaona ianao hampiatoana ny kaontinao. Mora ihany ny manajanona ny faktiora amin'ny Internet toy ny mora ny manomboka azy! Ho an'ireo orinasa manana onboarding, consultation ary fanohanana, ny fifanarahana farafahakeliny 6 volana na mihoatra dia mahazatra kokoa.
Usage - Mety hanova be ny fampiasana ianao - na nitombo na nihena. Tokony hohafoina ianao raha tsy mampiasa na mampiasa kely ny rafitra ary tsy tokony hosaziana noho ny fampiasana tafahoatra ny lozisialy. Tokony hanitsy ny vidiny ny vidiny ary hitombo ny fiverenanao amin'ny fampiasam-bola rehefa mampiasa bebe kokoa ny rafitra ianao.
Ny fananana mpisolovava vonona dia ny drafitra tsara indrindra hatrany! Imbetsaka izahay no voaroaka dia satria tsy nandalo ny fifanarahana nataon'ireo mpisolovava mahafinaritra anay izahay Alerding Castor Hewitt.
Tags: fahazoan-dàlana ho an'ny maso ivohovidin'ny maso ivohobillingfaktiorahosoka fifanarahanafifanarahanavidiny isaky nysarany tafahoatrasaasrindrambaiko ho serivisyfampiasana lozisialyfepetra fampiasanasarany tsy ampy taona
Ny orinasan-tserasera dia mila manova marketing mba hijanona eo alohan'izay